संकटकाल लगाएर भएपनि ओली चुनावमा जान्छन् : डा. दिक्षित : RajdhaniDaily.com
Home भर्खरै संकटकाल लगाएर भएपनि ओली चुनावमा जान्छन् : डा. दिक्षित
काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले देश अहिले ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने,–‘अहिले हामी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं । देशको अवस्था यस्तो छ कि निकट भविष्यमा के हुन्छ ? भन्नेपनि थाहा छैन् । यो अन्यौलग्रस्त र डरलाग्दो स्थिति हो । हामी जनताले धोकामात्रै पायौं । नेकपाका नेताहरुले ठूलो पाप गरे । केही काम गरेनन् ।’
शनिवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा डा. दिक्षितले आफूहरु जनताले नेकपा नेताहरुको पदीय भागबण्डा र लोभका कारण धोका पाएको भएपनि प्रचण्डको ग्रुपले चाहीँ ओली नमरिदिएकोले धोका पाएको भन्दै कडा टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नेकपाले सरकार गठन गरेको दिनदेखि, त्यो भन्दा अलिक अगाडि दिनदेखि नै यीनीहरुबीच यत्रो झैझगडा भएको रहेछ, मुलुकको त वास्ता रहेनछ उनीहरुलाई, उनीहरु त कसले प्रधानमन्त्री पड्काउने ? कहिले पड्काउने ? अढाई वर्ष पड्काउने कि अहिले पड्काउने ? अथवा गिद्धजस्तो भएर कुन बेला ओली मर्ला भनेर बसेका रहेछन् । अब अनफर्चुनेट्ली, ओली मरिदिएनन्, ओलीजी त मरिदिनुभएन, उहाँ त झन अहिले तन्दुरुस्त, हिजो देखिहाल्नुभयो उहाँ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, त्यसैले यीनले धोका खाए, हामीले त धोका खायौं, खायौं, तर विचरा प्रचण्ड ग्रुपले पनि धोका खाएकै हुन्, किनभने हामीले धोका खायौं, यीनको बेईमानीबाट, प्रचण्डले धोका खाए ओली नमरिदिएकोले ।’
उनले अहिलेपनि नेपाल कोरोनाको जोखिममा रहेको अवस्था सुनाए । तर, नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने काम नेताहरुले गरिराखेको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि जनता मार्ने ? दिनहुँ आन्दोलन भएका छन्, खोई मास्क ? नेताहरु त स्वार्थी र लोभी रहेछन् ।’ उनले ओली र प्रचण्ड भित्रभित्र काटाकाटको अवस्था रहेको तर बाहिर देखाउँदा मिलेको जस्तो गरेर नाटक गरेको पनि आरोप लगाए । त्यस्तै, ओली र माधव नेपालबीच पनि काटाकाटकै अवस्था रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने–‘झन ओली र प्रचण्ड त मिल्न सम्भव नै थिएन । अहिले माधव नेपालले प्रचण्डको साथ लिएर ओलीलाई खेद्छैन् ।’ दिक्षितले नेकपालाई जनताले दिएको भोट त कुहिएर गएको रहेछ भनेर हिनताबोध गरे ।
दिक्षितले लोकतन्त्रको खम्बा भनेको न्यायापालिका भएको भन्दै यसलाई कमजोर पार्ने काम कसैबाट पनि हुन नहुने धारणा राखे । तर, अहिले न्यायालाई पनि कमजोर तुल्याउने काम भैरहेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । उनले भने–‘हामीले न्यायलाई कमजोर बनायौं भने डेमोक्रेसी बच्न गाह«ो हुन्छ ।’
उनले नेकपाका विभाजित शक्तिहरु दुवैको आ–आफ्नो दाउ र रणनीति रहेको पनि सुनाए । प्रचण्ड र माधव नेपाल संसद पूनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको र ओली चुनावको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेको पनि उनले सुनाए । उनले संसद विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा बहसको क्रममा रहेकोले यो विषयमा बाहिर जथाभावी टिप्पणी गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने–‘सर्वोच्च अदालतलाई कसैले पनि लत्याउनुहुँदैन् । बरु, संसदकोबारेमा बोलौं । तर अदालतको विषयमा नबोलौं ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अदालतको फैसलाप्रति सम्मान गर्ने भनेर लिएको अडान सही रहेको भन्दै उनले प्रशंसा समेत गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको हाउभाउ हेर्दा पनि उनी निर्वाचन जाँदैछन् भन्ने कुरा निश्चित् भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘केपी ओली चुनावको लागि रेडी छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह निर्वाचनमा नजाने भन्दैछन् । भोलि निर्वाचन भयो भने सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् ।’ दिक्षितले प्रधानमन्त्री ओली संकटकाल लगाएर भएपनि निर्वाचनमा जाने सुनाए । चुनाव हुने भयो भने कोही पनि पाँच वर्षको लागि बाहिर नबस्ने भन्दै सबै दल निर्वाचनमा जाने पनि उनले दाबी गरे । भोलि राष्ट्रपतीय शासन लागु भएपनि त्यो ओली नै शासन गर्ने पनि उनले सुनाए ।
उनले आज दलहरु सडकमा उत्रिनुको कुनै कारण नै नभएको पनि जिकिर गरे । अदालतमा विचाराधिन भएको विषयमा यसरी सडकमा आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक नहुने उनको भनाई छ । उनले नेपालमा यस्तो खालको संसदीय व्यवस्था चल्न नसक्ने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय शासन चाहिने आवश्यकत्ता औंल्याए ।
युवा संघ पनि २ जेठकै अवस्थाबाट अगाडी बढछ : नरेश शाही
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकटको युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेश शाहीले ‘फुटेर होईन जुटेर, व्यक्तिको लागि होईन राष्ट्रको लागि’ भन्दै एकताबद्ध भएर...
काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंकै सडकखण्ड ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्षमा ६ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । चावहिल–साँखु...
Editor-Picks Kumar Raut - February 22, 2021 0
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नजाने
Breaking News राजधानी समाचारदाता - June 11, 2021 0
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । आज दिउँसो २ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा...
मन्त्रिपरिषद् बैठकः सीडीओलाई सर्वस्व अधिकार
Breaking News टेनिस रोका - April 29, 2021 0
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस नयाँ प्रजाति संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई शक्तिशाली बनाउने नीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै पनि...
संकट र सरकार
बिचार Kumar Raut - April 28, 2020 0
गत ८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस भएका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७...
अर्थ Kumar Raut - March 6, 2021 0
इलाम । गत वर्ष अदुवाको मूल्य पाएसँगै फाकफोकथुम गाउँपालिकाका तीन किसान गिरिजा खनालले सँधैको भन्दा धेरै खेती गरेका थिए । खनालले गत वर्ष पाँच...
प्रदेश ५ राजधानी समाचारदाता - April 14, 2021 0
Not-to-be-missed Kumar Raut - November 24, 2020 0
लन्डन । ईङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा साउथह्याप्टनले शीर्ष तेस्रो स्थानमा पुग्ने अवसर गुमायो । उल्भ्ससँग बराबरी खेलेर अंक बाड्नुपरेपछि शीर्ष तीन...
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य सडक केही वर्ष अघिसम्म दिउँसै धुलाम्मे देखिन्थ्यो । मोटरसाइकल चालक र पैदलयात्री धुलोको ठुलो मारमा पर्थे । सरकारी कर्मचारी...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनः बागमति प्रदेशमा आज मतदान
Breaking News महेश्वर गौतम - May 20, 2021 0
कोरोना संक्रमितलाई छुट्टै बुथ काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशतर्फ रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आज उपनिर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले कोरोना संक्रमितले पनि...
कौशिला कुँवर - June 7, 2021